ना इ टो छे ड्दा सुष्माको रु वा बा सी (भिडियोसहित) | Public 24Khabar
Home Entertainment ना इ टो छे ड्दा सुष्माको रु वा बा सी (भिडियोसहित)
ना इ टो छे ड्दा सुष्माको रु वा बा सी (भिडियोसहित)
नायिका सुष्मा कार्की फेसनेवल छिन् । उनी ‘उ द्रे को चो ली’ बोलको आ इ टम गितबाट नेपाली रजटपटमा चर्चामा आइन् । आ इट म गितले हिट भएकि सुष्मा फिल्ममा भने सधैँ फ्ल् प भइरहिन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र औँलाले गन्न सकिने छन् । फिल्ममा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकि सुष्मा समाजसेवामा भने अग्रसर छिन् ।
उनी कहिले अ ना थलयमा खाना खुवाउँदै गरेको भेटिन्छिन् त कहिले वृ द्ध वृ द्धा आमाबुवालाई विभिन्न उपहार लिएर वृद्धाश्रममा देखिन्छिन् । उनै सुष्माको अहिले भने ना इ टो छे डे को भिडियो भा इर ल भइरहेको छ । ना इ टो छे ड्दा निकै ड रा एकि सुष्माको भिडियो सार्वजनिक भएपछि धेरैले सकारात्मक एवं न का रात्म क टि प्प णी गरेका छन् । केहिले सुष्माले हरेक कुरा समाजिक संजालमा सार्वजनिक गर्ननहुने भन्दै सुझाव पनि दिएका छन् । उनले ना इ टो छे ड्दै गरेको भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ ।
नयाँ कारमा सुष्मा
हालै सुष्मा कार्कीले नयाँ गाडी किनेकि छिन् । उनले ह्युन्डाईको नयाँ गाडी किनेकि हुन् । फिल्मबाटट आयआर्जन नभएपनि उनी आफ्नो शौ क पुरा गरिरहेकि हुन्छिन् । त्यसैले त उनी सपिङ गर्न कहिले थाइल्याण्ड पुग्छिन् त कहिले लाखौँको गाडी किन्छिन् । फेसनेवल कार्कीलाई फेसनमा रुचि छ ।
पुजासँगको वि वा द
नायिका सुष्मा कार्कीले दुई वर्षअघि गरेको कलाकारको आ लो च नाका कारण वि वा द खे प्नु प र्यो । त्यो आ लो चना लाई हजारौंले टिकटक बनाएर सेयर गरेका छन् । यही टिकटकका कारण अभिनेत्री सुष्मा कार्की अहिले वि वा दमा परेकी छन् ।
आफूलाई ब द ना म गर्न र कलाकारसँग आफ्नो सम्बन्ध बि गा र्न केही मानिसहरू लागिपरेका यी अभिनेत्रीले टि प्प णी गरेकी छन् । अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको एउटा पुरानो अन्तर्वार्ता यतिबेला भा इ रल भएको छ ।
सोही अन्तर्वार्ताका कारण अभिनेत्री पूजा शर्मालगायत कलाकारका अन्य समर्थकले अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको सामाजिक सञ्जालमा टि प्प णी गरेका हुन् । उनले राजेश हमालको ए क्टिङ न रा म्रो तर फिल्म चलिरहेको छ भनेकी थिइन् । यस्तै, अभिनेत्री सुष्माले पूजा शर्मादेखि गायिका मेलिना राईसम्मलाई चि न्दिनँ भन्दै दिएको अन्तर्वार्ताले टिकटक बनाएर प्र चा रमा ल्याइएको छ । यसलाई सुष्माले नि यो जित भनेकी हुन् । मेलिना राई र राजेश हमालका प्रशंसकले पनि टिकटकमार्फत सुष्माको अन्तर्वार्तालाई भा इर ल बनाएका छन् ।
यसै विषयमा यी अभिनेत्रीले भनेकी छन्, ‘मैले दुई वर्षअघि दिएको एउटा अन्तर्वार्तालाई अहिले टिकटक बनाएर उ डा उने काम गरिएको छ । मैले नै बि र्सि सकेको यो अन्तर्वार्तालाई कसैले नि यो जित रूपमा टिकटक बनाएर कलाकारसँग मेरो सम्बन्ध बि गा र्न खोजेको हो ।’
अभिनेत्री पूजा शर्मासँग अहिले आफ्नो सम्बन्ध निकै राम्रो भएको सुष्माले बताएकी छन् । पूजाको प्रशंसा गर्दै उनको अभिनय राम्रो भएको पनि सुष्माले जि किर गरेकी छन् । जब कि त्यो अन्तर्वार्तामा उनले पूजाको अभिनय क म जोर भएको भन्दै टि प्प णी गरेकी थिइन् । पूजासँग अहिलेको सम्बन्धबारे अभिनेत्री सुष्माले भनेकी छन्, ‘पूजाले मलाई दिदी भन्छिन् र म उसलाई बहिनी भन्छु । मिडियाहरूले उ चा लि दिएर हामो सम्बन्ध बि गा र्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
टिकटक बनाएर आफ्नो ब द नाम गर्न खोजेपछि अभिनेत्री सुष्माले पनि टिकटकमार्फत नै आफूहरूको सम्बन्ध राम्रो भएको जवाफ दिएकी हुन् । ल कडा उ नका कारण मानिसहरू घरमा बे का मे भएको र उहिलेको कुरा खोतलेर अहिले सम्बन्ध बि गा र्न खोजेको पनि यी अभिनेत्रीको टि प्प णी छ ।
त्यसो त आफूले नायिका पूजाको टि प्प णी गरेको र गायिका मेलिनालाई नचिनेको भन्ने भिडियो अन्तर्वार्ता सम्पादन गर्नसमेत यी अभिनेत्रीले अनुरोध न गरेकी हैनन् । तर, दुई वर्षअघि नै युट्युबमा राखिएको यो भिडियोलाई सम्पादन गर्नतर्फ सम्बन्धित मिडियाले वा स्ता नगरेपछि त्यही प्रसंगले यतिबेला सुष्माले टि प्प णी स ह नु परेको हो । त्यो भिडियो अहिलेको नभएको फेरि पनि यी अभिनेत्रीले जि कि र गरेकी छन् ।
नायिका सुष्माको यतिबेला स्टाइल फेरिएको छ । सुष्मालाई धेरै दर्शकले बो ल्ड नायिकाको रुपमा चिन्छन् । तर, उनी अहिले चलचित्रको पर्दामा देखिन छा डे की छिन् । उनको स्वभाव फेरिएको छ ।
उनले अनलाइनखबरसँगको भिडियो कुराकानीमा जी रो फि गर बनाएर वि कि नी लगाउने अनी फेरि बो ल्ड बन्ने बताएकी थिइन् । चलचित्र ‘चलेछ ब तास सुस्तरी’ अ सफल भएपछि सुष्मा सु स्ता एकी हुन् । तर, उनी चलचित्रको अफर आएपनि आफूले रोल चि त्त नवुझेकाले नगरेको भन्न छाड्दिनन् ।
बलिउडका सुपरस्टार नायक सलमान खानले नेपाली आ ई ट्म गर्ल सुष्मालाई देखेर द ङ्ग भएका छन ।
बलिउडका द बंग खान अर्थात सलमान खान अन्तर्राष्ट्रिय शोमा सहभागी हुन परिवारका केहि सदस्य सहित बेलायत पुगेका बेला नेपालकी चर्चित आ ई टम गर्ल तथा नायिका सुष्मा कार्की संग अ कस्मा त भेट भएको छ । दुबै जनाको यस अघि परिचय नभए पनि भेटका दौ उ रान दुबै परिचीत भएका छ्न ।
सपिङ्ग गर्नका लागि एउटा सपिङ्ग मलमा पुगेकी सुष्मा त्यहाँ सपिङ्ग गर्दै गर्दा अ कस्मा त उनको नजर आफुतर्फ आउदै गरेका बलिउडका सलमान खान माथी पर्यो उनी झ स ङ्ग भईन ! के यो सपना त होईन ? भनेर आफैंले आफैंलाई चि मो टिन र थाहा भयो उनी बिपना मै रहिछन् । ह ता र ह ता र सुष्माले सेल्फी खिच्न आग्रह गरिन सलमानले हुन्छ भन्दै ईसारा गरे र सुष्माले सेल्फी खिचिन । केही नबोली सलमान खान स रा सर गए म केही बोल्न नै सकेन सुष्माले बताईन । सुष्माले द ङ्ग पर्दै भनिन, सलमानको म एकदमै ठुलो फ्यान भएको र उहाँ सङ्ग भेट्न पाउँदा एकदमै ह र्षित भएकी थिए । तर बोल्न नपरेकोमा एकदमै दु खी पनि भए उनले भनिन ।
म खुशी हुँदै मलको बाहिर मात्र के फेरि सलमान खान आफ्नै अगाडी पाए । हलो भन्दै मलाई बोलाउनु भयो ! र आर यु नेपाली ? भनेर सोध्नुभयो मैले पनि एस एस भने अनि हामी बीच करिब १० मिनेट कुराहरू भयो । उहाँले मलाई धेरै कुराहरू सोध्नुभयो मैले उहाँलाई धेरै कुरा सोधे साथै उहाँलाई मैले १ मिनेट जति क सि लो ह ग पनि गरेको सुष्माले बताएकी छिन । सलमानलाई भेट्ने, कुरा गर्ने, ह क गर्ने उनका करोडौं फ्यानको सपना हुन्छ, त्यसमा पनि सलमानले आफैंले बोलाएर कुराकानी गर्नु भनेको त्यो मान्छे खास हुनपर्छ जस्तो लाग्छ ।
म पनि राम्री र खास रहेछु जस्तो लाग्यो जो सलमानको नजरमा परे उहाँ संग १० मिनेट लामो सम्बाद समेत भयो यो मेरा लागी धेरै महत्त्व राख्छ सुष्माले बताईन । साथै सलमानले छुटिने बेला फेरि भेट्छु, भन्नुभएको छ चाडै नै भेट हुन्छ होला भन्दै सुष्माले बिश्वास समेत व्यक्त गरिन । सुष्मा दशैको साङ्गितिक कार्यक्रमका लागी प्रबासी नेपालीहरुको आमनन्त्रणमा बेलायत पुगेका बेला सपनाको राजकुमारलाई अर्थात सपना मान्छे सलमानलाई भेट्दा फु रु ङ्ग भएकी छिन् ।
अझै पनि त्यो १० मिनेट सपना जस्तै लागिरहेको सुष्मा बताउँछिन् । सुष्माले आफ्नो फेसबुक मार्फत सलमान संग भएको भेट्का तस्वीर पोष्ट गर्दै ड्रीम ब्वाई सम्म लेख्न भ्याएकी छिन । सुष्माले सलमानलाई भेटेको कुरा र ऊनीहरुका तस्बिरहरुले केहि समय अघि नेपाली सिनेमा र नेपाली संचार क्षेत्रमा औ धी चर्चा पाएको थियो ।
Previous articleनारायणीले बगाएकी महिलालाइ यसरि ब’चाए युवाहरुले, हेर्नुस ज्या’नको बाजी राखेर उद्वार गरे River Nepal
Next articleकोशिमा झनझन बाढी आउदै – लाखौँ भारतिय डुबे… नेपालमा भने पानीको बहाब घट्दै! सबैले हेर्नुहोला